Ogaden News Agency (ONA) – Gudoomiye Kuxigeenka ONLF oo shir hada si live ah u socda u qabanaya jaaliyada Norway+Daawo Video
Gudoomiye Kuxigeenka ONLF oo shir hada si live ah u socda u qabanaya jaaliyada Norway+Daawo Video
Gudoomiye kuxigeenka ONLF Dr.Maxamed Ismaaciil Cumar oo socdaal shaqo ku jooga wadanka Norway ayaa shir u qabtay jaaliyada Ogadenya ee wadanka Norway,shirkan oo saacadan socda ayaa waxaa kasoo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan wadankaasi Norway.
Shirka oo si live ah u socda wakaalada wararka Ogadenya(ONA) ay si toos ah u tabinayso ayaa waxaa weli socda soo jeedinta warbixinaha hogaamada iyo ha,yadaha jaaliyada Norway,waxaa shirka xaadir ku ah gudoomiye kuxigeenka ONLF iyo xildhibaano kamid ah golaha dhexe ee jwxo.
Gudoomiyaha Jaaliyadda Ogadenya ee Norway Mudane Khaliif ayaa madasha shirka kasoo jeediyey warbixin taabanaysay waxqabadka jaaliyada iyo sida firfircoon ee ay jaaliyadu uga howl gasho wadankaas iyo hay,adahiisa kala duwan.
Gudoomiye kuxigeenka ONLF Dr.Maxamed Ismaaciil ayaan weli la gaadhin khudbadiisa iyadoo ay hogaamada iyo cuqaashu weli wadaan warbixinaha waxaana la filayaa in daqiiqadaha inagusoo aadan uu gudoomiye kuxigeenka la wareegi doono Microphone ka si uu jaaliyadda usiiyo warbixinihii u dambeeyey ee Ogadenya iyo xaalada halgankaba.
Dr.Maxamed Ismaaciil Cumar ayaa mudooyinkan kujira socdaal shaqo uu ku kormeerayo jaaliyadaha Ogadenya iyo ururada hoos taga jaaliyadaha ee qaarada yurub wuxuuna socdaalkiisa shaqo ka bilaabay wadanka Sweden halkaas oo uu kaga qayb galay shirweynihii ururka OYSU ee qaarada yurub wuxuuna uga sii gudbay wadanka Norway oo uu saacadan shir ku qabanayo.
Shirkaas iyo warbixnnahiisa kala soco ONA